प्रचण्डको सुरक्षामा ५९ जना सुरक्षाकर्मी, फेरिए पीएसओ ! - Experience Best News from Nepal
प्रचण्डको सुरक्षामा ५९ जना सुरक्षाकर्मी, फेरिए पीएसओ !
पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निजी सुरक्षा अधिकृत फेरिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नरेशराज सुवेदीलाई दाहालको पीएसओको रुपमा खटाएको हो ।
दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका २९ र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीका ३० जना गरी ५९ जना खटिने गरेका छन् ।
उनीमाथि रहेको सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गरेर गृहमन्त्रालयले यो सुविधा दिएको हो । यसअघि दाहालको सुरक्षामा खटिएका डीएसपी सन्तोष राठौर महानगरीय प्रहरी वृत्त, लैनचौरमा सरुवा गरिएका थिए ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निजी सुरक्षा अधिकृत फेरिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० नरेशराज सुवेदीलाई दाहालको पीएसओको रुपमा खटाएको हो ।
दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका २९ र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीका ३० जना गरी ५९ जना खटिने गरेका छन् । उनीमाथि रहेको सुरक्षा थ्रेटलाई विश्लेषण गरेर गृहमन्त्रालयले यो सुविधा दिएको हो ।
यसअघि दाहालको सुरक्षामा खटिएका डीएसपी सन्तोष राठौर महानगरीय प्रहरी वृत्त, लैनचौरमा सरुवा गरिएका थिए ।
नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम समझदारी, अब सबै खर्च रोजगारदातालेनै व्यहोर्ने
पत्नीको शव नाघेर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे शरद
सानेपामा भयानक दुर्घटना, पत्रकारसहित दुईको मृत्यु !
जेठ २३ गते सार्वजनिक विदा !
बृद्धभत्ता एक हजारले बढ्यो, अब ३ हजार पाइने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन !
आज ‘लोकप्रिय’ बजेट आउँदै, कति बढ्ने भयो त कर्मचारीको तलब ?